Kuholela Abatshalizimali | Uhlu lwe-imeyili | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Kuholela Abatshalizimali
Ikheli le-imeyili labatshalizimali
Abatshalizimali Bethu bakhiwa kusuka kubatshalizimali okuqondiswe kubo ababhalise ku-inthanethi ukuze babekelelwe okusha okuvuselelwa kusitoko kanye nokutshala imali. Lolu hlu Lwabatshalizimali luqukethe abantu ababhalise ngaphakathi kokuphakelwa kokubuka kwemakethe nokuphakelwa kwesitoko kumasayithi wemibhalo. Futhi, sinanoma yiluphi uhlobo lemininingwane yokuxhumana etholwa ngabatshalizimali ethengiswayo. Zama nathi ukuholela isampula yamahhala. Ngakho-ke, ungacela isampula yabakhokhi bezimali.
Uhlu lwabatshalizimali abagunyaziwe kanye nokuhanjiswa kwezingcingo kwabathengisi, 95% okuqinisekisiwe ngokunemba. Ukufanelekela ukuhola njengotshala zimali, umtshalizimali kumele abonise intshisekelo kwenye yezindawo zethu ezibalulekile. Ukuthenga uhlu lwamakheli wemininingwane yabatshalizimali kusuka ku-LatestDatabase lead kuzodala ithuba elihle lokukhiqiza inzuzo enkulu ekutshalweni kwemali ngakunye.
Thenga Uhlu lwe-imeyili Yabatshalizimali
Investor Kuholela Umbuzo & Impendulo